अनमोल केसी स्टारर ‘क्याप्टेन' सगै भिडन्त गर्लात् प्रदिप भट्टराईको ‘जात्रै जात्रा’ले ! – Namaste Filmy
अनमोल केसी स्टारर ‘क्याप्टेन' सगै भिडन्त गर्लात् प्रदिप भट्टराईको ‘जात्रै जात्रा’ले !
बिहिबार प्रदिप भट्टराई निर्देशित चलचित्र ‘जात्रा’ को सिक्वेल ‘जात्रै जात्रा’ निर्माण घोषणा गरिएको हो ।चलचित्र निर्माणको घोषणा बह्न्दा पनि चलचित्र रिलिज मितिले अहिले नेपाली सिने बजारमा ठुलै हलचल मचिएको छ । विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बानियाँ, रबिन्द्र झा, बर्षा राउत, प्रकाश घिमिरे, सोहित मानन्धर आदिको मुख्य अभिनय रहने चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ को रिलिज अनमोल केसी स्टारर ‘क्याप्टेन’सगै हुने भए पछि नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा अहिले ठुलै तरङ्ग आएको छ ।
भिएफेक्सको कारण प्रदर्शनमा ढिलाई भएको चलचित्र ‘क्याप्टेन’ ले केही दिन अघी मात्रै फाल्गुन १७ गतेलाई प्रदर्शन मिती फाइनल गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै ‘जात्रै जात्रा’ ले पनि सोही मितीलाई फाइनल गरेको छ । यसरी हेर्दा यो बर्षको अन्त्यतिर यि दुई फिल्म बिच कडा टक्कर हुने देखिन्छ ।
अनमोल केसीको ‘क्याप्टेन’ लाई दर्शकहरुले लामो समय देखी प्रतिक्षा गरिरहेका छन् भने ‘जात्रा’ को अपार सफलता पछी दर्शकहरु ‘जात्रै जात्रा’ को लागि निकै उत्साहित रहेका छन् । दुई फरक फिल्महरु फरक जनराको भए पनि एक साथ प्रदर्शनमा आउँदा केही न केही मात्रामा असार भने पक्कै पर्नेछ । ‘क्याप्टेन’ ले एउटा फुटबल खेलाडीको कथा बोकेको छ भने ‘जात्रै जात्रा’ मा ‘जात्रा’ जहाँ सकियको थियो त्यस पछीको कथा रहेको छ ।
यि दुई चलचित्र एक साथ प्रदर्शनमा आउने कुराले सिने बजारमा चर्चा परिचर्चा सुरु हुँदा ‘जात्रै जात्रा’ का निर्देशक प्रदिप भट्टराईले भने यस बिषयमा धेरै बहस गर्न नपर्ने बताएका छन् । भट्टराईले चाडवाडको बेला नेपाली बजारले २ वटा फिल्म मज्जाले धान्ने निर्देशक भट्टराईको भनाई रहेको छ । फाल्गुन २० गते शिवरात्रीको छेको पारी १७ गते यि दुई फिल्महरु प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेका छन् ।
तर २ फिल्म धान्छ भन्दैमा बहुप्रतिक्षित २ फिल्महरु एक साथ जुधाउदा दुबैलाई केही न केही घाटा भने पक्कै हुनेछ । अहिले धान्छ भन्दा भन्दै भोली सच्चिकै जात्रै जात्रा चाँही नहोस् ।डेढ करोडको लगानीमा रहने चलचित्रलाई सिंगे लामा र यादव पौडेलले निर्माण गर्नेछन । रविन्द्र सिंह बानिँया कार्यकारी निर्माता रहनेछन् ।
रेखा थापाको ‘मालिका’ लाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट,चलचित्र सबैले हेर्न पाउने
'भुन्टी'को सफलता पछि निशान भट्टराईको 'मंसिर महिनामा'सार्वजनिक (भिडियो)